Madaxweynaha Waddanka Ruushka Vladimir Putin Oo Ka Adkaysan Kari Waayey Cunsuriyadda Lagu Hayo Ciyaartoyga Madow Ee Dalkiisa | Hohad News
Madaxweynaha Waddanka Ruushka Vladimir Putin Oo Ka Adkaysan Kari Waayey Cunsuriyadda Lagu Hayo Ciyaartoyga Madow Ee Dalkiisa
WARARKA CIYAARAHA(HOHAD NEWS)
Madaxtooyada waddanka Ruushka ayaa si adag uga hadashay hadallo cunsuriyad ah oo uu warbaahinta mariyey mid ka mid ah laacibiinta waddankaas oo uu ku ganay laacibiinta madow ee ka ciyaarta dalkaas.
Weeraryahanka kooxda Fulham ee Pavel Pogrebnyak ayaa sheegay inay tahay ‘Wax Lagu Qoslo’ haddii xulka qaranka Ruushka lagu daro ciyaartooyo midabkoodu madow yahay, waxaana hadalkaasi uu markiiba ku fiday dunida, maadaama uu yahay hadal cunsuriyad ku dheehan tahay.
Xafiiska Madaxeyne Vladimir Putin ayaa markiiba hadal kasoo saaray ereyada uu adeegsaday ciyaartoygaasi, waxaanay meel adag iska taageen cunsuriyadda iyo midab takoorka lagu hayo ciyaaryahannada madow.
Mikhail Fedotov oo xafiiska madaxweynaha u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha, oo hadal kasoo saaray ayaa sheegay in ereyada Pavel ay leeyihiin ‘Dhadhankii Cunsuriyadda’, waxaanu bixiyey ishaaro ah inay suurtogal tahay in ciyaartooyo midabkoodu madow yahay ay u ciyaaraan Ruushka.
“Waxaan aaminsanahay in ciyaartoy kasta oo si fiican u ciyaara oo haysta dhalashada Ruushka uu xaq u leeyahay inuu metelo xulka qaranka Ruushka. Midabka jidhkooda, indhahooda, timahooda iyo wax kasta oo kale muhiim maaha.” Sidaas ayuu yidhi Mikhail Fedotov.
Ciyaartoyga hadallada cunsuriyadda ah jeediyey ee Pavel Pogrebnyak ayaa waxa uu hadalkiisu daba socday qorshe ay dawladda Ruushku dhawaan bilowday oo ah in ciyaartoyga aan dalkaas u dhalan ay heli karaan baasaboorka Ruushka oo dhalasho la siinayo, waxaana ciyaartoygii ugu horreeyey ay noqdeen laba laacib oo kasoo jeeda waddanka Brazil oo lagu magacaabo Mario Fernandes oo u ciyaara CSKA Moscow iyo Ariclenes da Silva Ferreira (Ari) oo u ciyaara Krasnodar, kuwaas oo dhalashada Ruushka la siiyey.
Pavel oo si toos ah u magacaabayey labadan ciyaartoy ayaa yidhi: “Ma arkayo sabab ay sidani u dhacday. Ma fahamsani sababta Ari loo siiyey baasaboorka Ruushka, waana wax lagu qoslo in ciyaartoy Madow uu qayb ka noqdo xulka qaranka Ruushka. Mario Fernandes waa ciyaartoy sare, laakiin waxaanu haysanaa Igor Smolnikov oo booskiisa nooga ciyaara. Si fiican ayaanu u ciyaari karnaa iyadoon ciyaaryahanno ajaanib ahi nagu jirin.”
Si kastaba ha ahaatee, Pogrebnyak ayaa la filayaa inuu waajaho ganaax toban ciyaarood ah oo uu dibedda kaga ahaan doono garoomada maadaama uu hadallo cunsuriyad ah sheegay, waxaana dacwad ku oogaya xafiiska la-dagaallanka Takoorka ee Xidhiidhka kubadda Cagta Ruushka oo, waxaana warbixintiisu ay soo bixi doontaa dhawaan.